Gudiga Musuq maasuqa oo ugu baaqay DKMG ahayd inay hantida soo wareejiyaan
Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaallanka musuqmaasuqa, Khadra Maxamed Ciise ayaa sheegtay in keliya labo wasaaradood ay ka soo jawaabeen codsi ay horey ugu gudbiyeen hayadaha xukuumaddii KMG aheyd, kaasoo ku saabsanaa soo gudbinta hantida ma guurtada ah iyo guurtada ee uu leeyahay qaranka Soomaaliyeed.
Khadra waxay sheegtay in wasaaradaha arrimaha dibedda iyo tan qorsheynta ay soo gudbiyeen diiwaanka shaqaalihii u shaqeynayay oo isugu jira kuwo joogta ah iyo kuwo aan joogto aheyn.
Waxay sheegtay in wasaaradda qorsheynta ay soo gudbisay hal baabuur oo duq ah, halka wasaaradda arrimaha dibedda aaneyn soo gudbin wax baabuur ah, marka laga soo reebo diiwaanka shaqaalaha oo ay labadooduba soo gudbiyeen.
Khadra waxay wasaaarad kasta ka codsatay inay si deg-deg ah u soo gudbiso diiwaanka hantida iyo shaqaalaha, si dowladda cusub ay u hesho meel ay wax ka billowdo.
Waxay intaas ku dartay in haddii aan hantidaas la helin ama aan la diiwaan-gelin ay dowladda cusub ku khasbanaan doonto inay howsha ka billowdo eber; oo la mid ah in hantida qaranka iyo dhaqaalaha dalka ay baabaeen.
Qalin hadduu yahay waxaan codsaneynaa in ninka wasiirka ah, ninka madaxweynaha ah, ninka raysul wasaaaraha ah ama ninka raysul baarlamaanka ah uu noo soo gudbiyo, isla markaana uu kaga tago miiskii uu ku shaqeynayay, ayay tiri Khatra.
Waxay kaloo hayadaha dowladda ka codsatay inay soo gudbiyaan liiska shaqaalaha dowladda oo tifaftiran, heerarkooda, waxa ay yihiin iyo jagooyinkooda, iyadoo walaac ka muujisay in haddii liiska shaqaalaha la waayo ay noqon doonto in howsha laga soo bilaabo eber.
Guddiga madaxa bannaan ee qaabilsan la dagaallanka musuqmaasuqa waxaa la magacaabay January 2012, wuxuuna ka koobana yahay sagaal xubnood.